Ukuphupha ngamatyala ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama elithi "ukukopela" linentsingiselo engendawo kubantu abaninzi. "Bamba umntu", "Cwangcisa umgibe" o "Bamba umgibe" - onke la mabinzana ahlala ikakhulu kwiingcinga zobuqhetseba okanye iyelenqe. Ngapha koko, kukho umgibe wokubamba umntu okanye into kwaye ubathintele inkululeko yabo. Umgibe, ovaliweyo namhlanje, wawusetyenziselwa ukubamba iibhere, iimpungutye neengcuka. Owona mgibe wezilwanyana udumileyo mhlawumbi ngumgibe wempuku. Umgibe we-booby usetyenziselwa ukwenzakalisa okanye ukubulala amajoni kunye nabahlali emfazweni: ukuba ithe yadibana nento ebonakala ingenabungozi, iyazigqabhuka ngokuzenzekelayo.
Ngoku, ufuna ukukuxelela ntoni iphupha lomgibe? Inokuchazwa njani? Ukutolikwa kwephupha, jonga ngononophelo kwiinkcukacha zephupha lakho kwaye uzibandakanye ekutolikeni.
1 Uphawu lwephupha «umgibe» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umgibe» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umgibe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umgibe» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha "kukukopela" njenge Iphupha lesilumkiso qonda xa uphupha, ekufuneka ibonwe ngokupheleleyo. Ukuphupha kusengozini kwaye kuya kufuneka ufumanise ngenxa yephupha lakho lobomi lokuvuka. Ukuba iphupha libona uphawu lwephupha "lubambe" kufutshane okanye lukude, oku kubonisa ukuba ukhuselekile, kodwa Lumnka Kufuneka uhambe. Umntu oneengqondo ezingalunganga ufuna ukukuseta ngaphakathi el mundo Ukusuka ekuvukeni, ukulala kunokukuqaphela ngexesha kunye nokuthintela ubuqhetseba.
Ukuba iphupha ngokwalo liyasebenza kwaye liseta umgibe ephupheni, uya kusebenzisa inkohliso ngokwentetho ngokubanzi yephupha ekuvuseni ubomi ukuze ufeze izicwangciso zakho. Ukuqwalaselwa ephupheni kufuneka kuqondwe njengesilumkiso ephupheni lokuphinda kwenzeke ngokuzonwabisa, kuba umntu ubeka umgibe.
Ukuba iphupha liwela emgibeni ephupheni, uya kuba ngumntu kungekudala. we ethandweningubani ongalufanelanga uthando lwakho. Kule meko, uphawu lwephupha lukwabonisa ukuba iphupha bahlekisa ukuba awukhathali ngokwaneleyo. Ukuba iphupha libambe omnye umntu emgibeni ngelixa elele, ke ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kukuxelela ukuba into ethile, elinde iphupha ixesha elide, iza kwenzeka kungekudala.
Ukubamba umdlalo kumgibe ephupheni kunokubizwa impumelelo emsebenzini itolikwe. Umbono wesibatha sasendle esingenanto ephupheni ngumqondiso ephupheni lokuba ububi buza kwenzeka kungekudala. Umgibe omdala okanye owaphukileyo ephupheni umele, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, ukusilela okunokwenzeka kubomi beshishini.
Umgibe weempuku njengophawu lwephupha uhlala ubhekisa kumandla okwenza izigqibo komphuphi. Ukuba uzama ukubamba intaka efana ne-ibis ngelixa ilele, kufanele unamathele kwiminqweno yayo.
Uphawu lwephupha «umgibe» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha ubona "umgibe" isimboli yephupha njengesixhobo soku peligro, Ukuzithoba kunye nokuxhomekeka okuhlukeneyo. Ukuba iphupha liwela emgibeni ngexesha lephupha, isiphoso, ngokokuchazwa kwengqondo kwephupha, alixhaphanga kuphela kumbambisi, kodwa ngokuyinxenye ephupheni ngokwalo. Isimboli yamaphupha inokubonwa apha njengesikhumbuzo ngenxa yokuziphatha kwakho kwakutshanje. Iphupha lalikholeleke kakhulu okanye lingakhathali.
Uphawu "lokukopela" lwephupha lukwabonisa iphupha onokuthi ukhohliswe ngalo nangaphandle ulindelo olungeyonyani okanye iinjongo ezinokuyonakalisa. Ukuba iphupha liwela emgibeni ngexesha lokulala, oku kuthetha ukuba, ekutolikeni kwengqondo ngephupha, imvakalelo yokuba kwikona. Ukuthinjwa kumgibe wephupha kubonisa ukuba ukuphupha uwedwa akunakushiya ngasemva iindlela zokuziphatha ezindala kunye neendlela zokucinga. Ukwenza oku, ufuna uncedo lwabanye abantu kwihlabathi elivukayo. Ukuba iphupha elo libambe omnye umntu okanye isilwanyana xa ulele, lo ngumqondiso wokuba ufuna ukubambelela kunye nokukhusela into ebomini bokuvuka. Ibhabhathane elibanjiswe kumgibe linokuqwalaselwa kutoliko lwengqondo lwamaphupha njenge Ukuvalelwa entolongweni kwesiqu sakho itolikwe.
Uphawu lwephupha «umgibe» - ukutolika kokomoya
Uphawu "lomgibe" lwamaphupha luphawu ekutolikeni amaphupha okomoya. ukuthobeka ngokomoya. Ngokunokwenzeka, ukuphupha kukwabonisa ukuvalelwa okuziva emzimbeni wakho.